Fampisehoana finday, efijery finday, fizarana finday - TC
TC dia orinasa teknolojia matihanina manokana amin'ny sehatra R&D, famokarana ary fivarotana efijery fisehoan'ny LCD & OLED ho an'ny telefaona finday. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra seho an-tsehatra lehibe eo amin'ny tsenan'ny kojakoja finday ao Shina.
Ny TC dia manana mpiasa maherin'ny 500 ary faritra atrikasa maherin'ny 5.000 metatra toradroa amin'izao fotoana izao, atrikasa tsy misy vovoka, hafanana sy hamandoana tsy an-kiato avokoa izy rehetra, ao anatin'izany atrikasa tsy misy vovoka mihoatra ny 1000 metatra toradroa.
Ny ekipa dia manana ekipa teknika sy fitantanana matanjaka, ao anatin'izany ny mpikambana ao amin'ny ekipa R&D 20 mahery, misy injeniera matihanina mihoatra ny 50 amin'ny fanodinana, fitaovana ary kalitao.
Fantatrao ve raha soloina ny efijery voalohany rehefa repai ...
Matetika, matetika isika no sendra ilay toe-javatra fa vaky tsy nahy ny efijery finday, misy tranga sasany vakiny fitaratra, ny sasany tsy aseho ny efijery anatiny dia vaky ihany koa. Ny faha ...
Fantatrao ve ny fivoaran'ny telefaona finday? Tena ch ...
BPM Era Raha miresaka an'ity vokatra ity dia tsy maintsy nisy olona nahita izany. Raha ny tena izy, raha lazaina amin'ny fomba hentitra, ity vokatra ity dia tsy azo antsoina hoe finday. Ity fitaovana ity dia niseho tamin'ny taonjato faha-20, whe ...
Taorian'ny ampahany amin'ny efijery fampisehoana finday, wher ...
Ny habeny dia làlana manan-danja hatrany amin'ny fampivoarana ny efijery finday, fa ny telefaona finday misy 6.5 santimetatra dia tsy mety amin'ny tanany iray. Noho izany, tsy mampiavaka azy ...
Maninona no mihetsika ambany ny efijery raha ny telefaona finday ...
Mamelà ahy ianao hametraka fanontaniana iray aminao matetika Ny telefaona finday matetika apetraka eo ambony latabatra rehefa tsy ampiasaina, apetrakao ve ny efijery sa hidina ny efijery? Fa fantatrao ve? Apetraho ny telefaona finday ...
Mametraka hatrany ny kalitao amin'ny toerana voalohany ary manara-maso tsara ny kalitaon'ny vokatra isaky ny fizotrany
TC dia mametraka rafitra fitantanana kalitao henjana, nahazo ny fahatokisana sy fiderana avy amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny teknolojia famokarana mandroso, kalitaon'ny vokatra tsara ary serivisy matihanina
TC dia manana mpiasa maherin'ny 500 ary faritra atrikasa maherin'ny 5.000 metatra toradroa amin'izao fotoana izao, atrikasa tsy misy vovoka, hafanana sy hamandoana tsy an-kiato avokoa izy rehetra, ao anatin'izany atrikasa tsy misy vovoka mihoatra ny 1000 metatra toradroa.